Prọfesọ Mary Abukutsa-Onyanko na mbipụta mbipụta akwụkwọ nri na nri nri OA - AfricanArXiv
bipụtara Jo Havemann on 19th December 2019 19th December 2019
Na mbido Disemba 2019, Ọkachamara Abukutsu-Onyanko gosipụtara ọrụ ya UTC-SPARC Africa Open Symposium 2019 Symposium na Cape Town, South Africa.
Otu n'ime ndị na-eme nchọpụta banyere ihe ọkụkụ n'Africa, Prọfesọ Mary Abukutsa-Onyango ga-ekerịta ahụmịhe ya na-eme ka ọ pụta ìhè na ịnweta ozi dị mkpa maka mmepe. # OASymp2019 #SPARC #SPARCAfrica #iheanacho #iheanacho #igbo #iheanyichukwu #igbo pic.twitter.com/NzCgyKwYKW
Ele ihe ngosi na Zenodo:
Ihe dị ka afọ iri gara aga, Leslie Chan ajụjụ ọnụ Prọfesọ Mary Abukutsa banyere ọrụ ya dị ka ọkà mmụta sayensị na Agriculture for Food Security na African Indigenous Inine.
Akwukwo oghe ndi oghe bu ihe anaghi agha agha. Ha di nkpa di nma n’oge a. […] Mgbe anyị na-eme nyocha, ọ baghị uru ma ọ bụrụ na i debe ya n'okpuru tebụl ma ọ bụ na kaboodu. Anyị kwesiri ịkekọrịta ozi ahụ, nyocha anyị mere - n'agbanyeghị ntakịrị ihe ọ bụla - ọ bụrụhaala na ọ nwere ike imetụta mmepe, na ụzọ ndụ ndị mmadụ na n'ụzọ iche echiche ndị mmadụ.
Prọfesọ Mary Abukutsu-Onyango
Lelee ajụjụ ọnụ zuru ezu ebe a:
Categories:	Open AccessNkwukọrịta Sayensị
Tags: Akwukwo nri nke umuaka nke AfricaNchekwa nriAkwụkwọ Mepee oghere
Ajụjụ ọnụ nke Ömer Özak nke Mahadum Southern Methodist (SMU)
You ma ọrụ dị iche iche, ọdịbendị ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme na mmepe akụ na ụba na esemokwu na mpaghara Africa? N'ajụjụ ọnụ a Dr. Ömer na-enyocha isiokwu a dị mkpa ma kọwaa ọrụ ha na oke oke nke esemokwu na esemokwu dị ka otu isi nsogbu dị n'Africa.